Utubaa wabii waliin jiraachuu keenyaa
Biyya keenya Itoophiyaa keessatti nageenyi fulla’aa fi demokraasiin wabummaa qabu diriiree, guddinni dinagdee fi hawaasummaa keenya akka si’oomu, mirga hiree keenyaa ofiin murteeffachuuf qabnu fayyad­amnee ,fedhii bilisaa keenyaa, olaantummaa seeraa fi fedhii keenya irratti kan hundaa’e hawasa siyaas-dinagdee tokko waliin ijaaruudhaaf kutannee ka’uu qabna. Kaayyoo kana galmaan ga’uudhaaf ammoo,mirgoonni bu’uura dhuunfaa, garee fi lammiiwwan kabajamuusaa ,walqixummaan saalaa mirkanaa’uusaa, amantaawwanii fi aadaawwan loogii tokko malee tarkaan­fachisuufi dagaagfachuuf haala mijaawaa nuuf uumeera.
Heerri mootummaa Rippaabilika Demokraatawaa Itoophiyaa Sadaasa 29,1987 ragga’ee hojiirra jirus kana dhugoomsa.Guyyaa kana arguufis aar­saa lubbuu ilmaan sabootaa fi sab-lammootaa hedduu gaafataeera. Qabsoo bifa bittinaa’eenis ta’e bifa gurmaa’een aarsaa kaffalameen wabii ummata keenyaa kan ta’e heerri mootummaa ragga’uu danda’eera.Seenaan yoomi­yyuu kan dagatuu miti.
Aarsaa gootonni kaffalan akkamittiin yaadattu? Injifannoo gonfanne kana hammam keenyatu kunuunsaa jirra?,itti fufiinsa isaatiif hangam keenyatu aarsaa barbaachisu kanafaluuf of qopheessine?, Hojii irras oolfachaa jirraa?
Biyya keenya Itoophiyaa keessatti ,aadaa boonsaa mata mataa keenyaa qabna.Akkasumas haala teessuma lafaa kan mataa keenyaa qabaachaa turre,har’as qabna.Saboonni,sab-lamoonnii fi ummattoonni dameewwanii fi sadarkaa garagaraa irratti waliin ta’uudhaan biyya keessa jiraachaa jir­ruu dha. Jiraachufis jenna. Ilaalchaa fi faayidaa walinii horaneerra. Kun amantaa hunduma keenyaati.Carraa keenya hundumaa gara fuul-duraa kana bu’ureeffachuu qabuu dha. Dogoggora walitti dhufeenya keenyaa kan ,see­naa darbe irraa dhaalle sirreessaa fi faayidaa waliniitiif ta’uu fudhanneer­ra. Fudhachuu qoofaanis kan dhaabbatu utuu hin taane, faayidaa,mirgaa fi bilisummaa walii keenyaa waliin wal deeggaruun guddisuudhaaf sochoo­neerra, ammas yoo ta’e socho’aatuma jirra.
Waggoottan 18 darban kanuma mirkaneessu.Biyya keenya keessattis, na­geenya, misooma, demokraasii itti fufiinsa qabuu fi fayyadamtummaa um­mataa mirkaneessu dhugoomsuuf hojiiwwan gama siyaas -dinagdeefihawaa­summaa hojjetamanis kanaaf wabii dha. Kunis,Oggantummaa DH.D.U.O/ADWUI tiin firii argamee dha.Kanaaf Sadaasa 29 waggaa waggaan kan ka­bajnus.
Asirratti Heerri mootummaa biyya keenyaa wabii inni kaa’e yoo ilaalle, hammam kabaja sabootaa fi sab-lammootaatiif akka dhaabbate agarsiisa. Innis keewwata ‘39’ “mirgi sabootaa,sab-lammootaa fi ummattoo­ta Itoophiyaa kamiyyuu ofiin of bulchuuf mirga guutuu qabu. Mirgi kun sabichi,sab-lammichi mirga qubsuma lafaa irra qubatetti ittin of bulchuu, jaarmiyaalee mootummaa hundeessuu, akkasumas, bulchiinsotaa naannoo fi federaalawaa keessatti bakka bu’insa madaalawaa argachuu” of keessatti hammata.Bifuma wal fakkaatuun keewwata xinnaa 4 yoo fudhannes mirga saboota,sab-lammootaa fi ummattoota Itoophiyaa hiree ofii ofiin murteeffa­chuu hanga fottoquutti kan hojiirra oolu jechuun kaa’eera.
Walumaagalatti, heerri mootummaa RDFI keewwata 106 qabu kun wabii ummattoota biyya keenyaati.Kanaafis, Heera mootummaa kana kabajuu fi kabachiisuun dirqama hunda keenyaati.Ol’aantummaan seeraa bakka hin eeggamnetti kabajni sabootaa,sab-lammootaa fi ummattootaa jiraachuu hin danda’u. Kanaaf hundi keenyayyuu heera mootummtiif waardiyyaa dhaab­bachuu qabna.